के तपाई लाइ थाहा छ २० वर्षकाे उमेरमा के चाहन्छन् महिला – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/के तपाई लाइ थाहा छ २० वर्षकाे उमेरमा के चाहन्छन् महिला
के तपाई लाइ थाहा छ २० वर्षकाे उमेरमा के चाहन्छन् महिला
अंग्रेजिमा एउटा भनाई छ “वुमन इज अ फराइन ल्याण्ड”, अर्थात महिला बुझ्नै नसकिने प्राणी हो ।
महिलाले साच्चिकै जिवनमा के चाहन्छ ? त्यो पनी २० वर्षको योङ्ग उमेरमा । यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न हो ।
महिलाले यो टिनएजमा केही निश्चित चिजहरु चाहन्छन् । जस्लाई तपाइँ हामिले उनिहरुको सामान्य व्यावहारबाट पनी थाहा पाउन सक्छौँ । के हुन ति चाहानाहरु?
स्वतन्त्रता २० वर्षको कलिलो उमेरमा महिलाले धेरै चाहाने भनेको स्वतन्त्र रहनु नै हो । तिनिहरु एक्लै बस्न र जे आफ्नो मनमा लाग्यो त्यही गर्न चाहान्छन् । केही समयसम्म आफ्नो गार्जिएनको अन्डरमा रहेपनी आत्मनिर्भर भइसकेपछी भने त्यो उनिहरुका लागी भारी महसुस हुन्छ । यो उमेर करिब बिहे हुने बेलाको उमेर भएको ले उनिहरुले बिहे पछीको बन्धनको समयको लागी रेस्ट टाइमको रुपमा पनी यसलाई लिन्छन् ।
राम्रो कमाई हुने जागिर मानिसको स्वतन्त्रता सँग पैसाको पनी महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । पैसा भएन भने मानिसले प्राय जतिसुकै सुख प्राप्त भएपनी सन्तुष्टि भने मान्दैन । २० वर्षको टिनएज टाइममा पनी महिलाले चाहने भनेको पैशा नै हो । र त्यसका लागी राम्रो आन्मदानि हुने जागिर उनिहरुले खोजिरहेका हुन्छन् ।
माया प्रत्येक महिलाले जिवनमा धेरै भन्दा धेरै चाहाने भनेको माया नै हो । २० बर्षको तातो उमेरमा उनिहरुको इच्छा आफुले कसैलाई माया गरे पनी नगरेपनी आफुले भने माया पाउनै पर्छ भन्ने हुन्छ । राम्रो प्रमीको उनिहरुले निकै ठुलो अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । जस्ले जिवनमा कहिल्यै धोका नदेओस ।
साँचो मित्र साथि त्यो पनी मन मिल्ने यो अवस्थाको उनिहरुको अर्काे महत्वपुर्ण चाहाना हो । सबैलाई साथि बनाउन सकिदैन र बनेको साथिले सत्य कुरा बोल्दैन की भन्ने डर उनिहरुमा हुन्छ । जो सँग आफ्ना सबै कुराहरु सेयर गर्न सकियोस । त्यो कुरा सँधै सेके्रट रहोस । यो उनिहरुको अर्को चाहाना हो ।
महंगा सामान २० वर्षको उमेरमा महिलाहरुको तिब्र इच्छा भनेको महंगा कस्मेटिक्सका सामानहरु खरिद गर्नु मा हुन्छ । उनिहरुले आफ्ना साथिहरुलाई देखाउन पनी यस्ता सामानहरु किन्ने र प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो पारिवारिक स्थीती मजबुद भएको देखाउन र सुन्दर हुनपनी उनिहरुले यो कुरामा बढि ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । पैशा र राम्रो आम्दानि हुने जागिर खोज्नु कारण पनि यो नै हो ।
कार प्राय आधुनिक महिलाले इच्छा व्यक्त गरेपनी नगरेपनी कार चढ्ने सपना उनिहरुमा हुन्छ । त्यो काम छिटो छरिटो सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका लागी पनी त्यो गरिएको हुन्छ र कतिपयले भने सौखको रुपमा पनी यस्तो इच्छा गरिरहेका हुन्छन् ।
घर घर किन्ने भन्ने कुरा त्यति सामान्य कुरा होइन । तर २० वर्षका महिलाले यस्तो असामान्य इच्छा पनी उनिहरुमा हुन्छ । मानिस ४० वर्षको नपुगीकन एउटा कार चढने र घर किन्ने हैसियितमा पुगि सकेको हुँदैन । आत्म निर्भर भएको देखाउन पनी उनिहरुले एउटा आफ्नो निजि घरको इच्छा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।
बगैँचा घर सँगै कतिपय महिलाहरुको सुन्दर गार्डेनको पनि इच्छा हुन्छ । फुलहरु सहितको गार्डेन र त्यसको स्याहार सुसारमै समय बिताउने सपना उनिहरुको हुन्छ । चिटिक्क परेको बगैँचामा सधैँ भरि काम गर्न उनिहरु रुचाउँछन् ।
बच्चा धेरै महिलाको इच्छा बच्चा जन्माउने र उसै सँग समय बिताउने हुन्छ । सामान्यतया २० वर्षको स्वतन्त्र उमेरमा उनिहरु केटाकेटी सँग झन्झट महसुस गर्छन भन्ने विश्वास छ । तर त्यो गलत हो । उनिहरुले कहिल्यै व्यक्त नगरे पनी आमा हुने रहर उनिहरुलाई यही उमेर देखी सुरु हुन्छ ।
सहयोग यो उमेरमा महिलाहरुले अरुलाई परेको सहयोग गर्न चाहान्छन् । जस्ले गर्दा उनिहरुले माया पाउन सक्छन् । र आफुलाई परेको बेलामा पनी कसैले सहयोग गरिदियोस भन्ने चाहाना उनिहरुको हुन्छ ।
जनावर उनिहरु यो उमेरमा एक्लै बस्न र सोचिरहन चाहान्छन् । साथि भने सेयरीङको लागी मात्रै हो भन्ने उनिहरु सोच्छन् । उनिहरु अरु कोही भन्दा पनी बरु घरपालुवा जनावरहरु जस्तै कुकुर, परेवा, बिरालो, खरायो आदि जस्ता जनावर सँग रहन रुचाउँछन् ।
यात्रा यात्रा गर्ने प्राय धेरै मानिसको रहर हुन्छ । त्यसैमा २० का महिलाहरुमा यस्तो रहर अरुभन्दा अझैँ बढी हुन्छ । धेरै कुराहरु जान्न, धेरै ठाउँहरु घुम्न, माया प्रेमका कुराहरु सेयर गर्न र यात्रामा सहज हुने भएर पनी उनीहरुले यात्रा गर्न मन पराउँछन् ।